အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: 2010
ဒီလူ ဆိုတာ..ငဒူ ပေါ့
ဒီလူ ဆိုတာ..မာချင်သော ငတေ
ဒီလူ ဆိုတာ.. ဘုရင်ရူး ဘိုးတော်ရုး
ကျွန်းတောတွေ ခမ်းခြောက်ဒီလူ ဆိုတာ တနပ်စား ငကြောက်
လက်နက်ဝယ်ယူ မီးကျိုးမောင်းပျက်ဒီလူ လုပ်ရပ်က တိုင်းပြည်ဖျက်
ဘာအရည်အချင်းမှ ပြောရန်မရှိဒီလူ အရည်အချင်း ပလာနတ္တိ
သူခိုးရွှေရ မကြွားရ မနေနိုင်
အာရှရဲ့ ပုတ်သိုးနေတဲ့ အမှိုက်တပုံ
အာရှရဲ့ တာစူ ကွဲမဲ့ ဗုံးတစ်လုံး။
မသဒ္ဓါ ( ၁၂။၂၁။၂၀၁၀)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:08 PM0comments
ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာနဲ့ ကြက်တိုက်စားမဟဲ့
မန်ချက်စတာ ကို ခိုင်းစားချင်သတဲ့
ကျောက်ဆည်သား ဒီ မြေးအဖိုး..
လောင်းကစားဆို မက်လိုက်ပေ့ လူဆိုး.။
မြို့ ဝန် ဘိုင်ဆတ် အာဏာသား
မင်းသားအို တေဇ..ထီးနန်းက မျက်စောင်းထိုးတယ်။
နန်းမတော်ကြိုင်ကြိုင် ထမီစုတ်တစ်ထည်နဲ့ နန်းတော်လည်.
ရနောင်မောင်မောင်တုတ် နေရွှေသွေးအောင် တဏှာသည်။
နောက်ဆုံးအမည်တွင်မှာ ဒုတိယ တရုပ်ပြေးမင်းဆက်များ။
ဂီရိ အ၀င်..မျက်နှာမပျက်တတ်သော ရှင်ဘုရင်
ဒီလို လူယုတ်..မြန်မာထီးနဲ့ တန်သလား..
ဒီ အမျိူးယုတ်. မြန်မာ ပြောရ အရှက်သား..
နိဂုံးမှာ ပင်လယ်မှာ ပြန်ရန်ကမ်းမရှိ
လှို့ ဝှက်ချက်တွေ ပေါ်လာပြီ.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:04 PM0comments
ချီးမြှောက်ဖို့ ကျ ခက်တယ်။
လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ ကျ ခက်တယ်။
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ ကျ ခက်တယ်။
သူတပါးကို နိုင်ဖို့ ထက်..
ကိုယ့် အတ္တကို နိူင်ဖို့ က ခက်တယ်။
မအောင်မြင်သေးခင် ရင့်ယော် ပုပ်ရိ
ဆွေးမြေ့မသွားဖို့ က အရေးကြီးတယ်။
သင်၏ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး
မိမိ နိုင်ရာ ဒေါင့်တစ်နေရာ
မိမိ ဆိုင်ရာ ခေါင်းမရှောင်သာ
သူ့ တာဝန် သူ့ ဝန်တာ.
အတူတူ လှုပ်ရှားမှ ရွေ့ မှာမို့ 
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ..
လူရှုံး လူအ..လူစွမ်း လူစ
ငယ်သား လည်း ငယ်သား
တပ်မပျက်ဖို့ က အရေးကြီးတယ်။
ခေါင်းခါး ခြေလက်..သွက်သွက် လှုပ်ရှား.
ရင်းရမယ့် လုံ့ လ
အလကား ဘာတခုမှ မရ
ရှေ့ တက်မယ် လာ..
ခေါင်းစဉ်ဒီဇိုင်းကို ကျေးဇူးပြု ရေးဆွဲပေးသော မောင်လေးမျိုးအားကျေးဇူး အနန္ဒ ပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:09 PM0comments
အမေ့ လက်ကို မြဲမြဲတွဲထား
အမေက သား ကိုချစ်တယ်။
အမေ အသက်အရွယ် ရ
လူအုပ်ထဲ သွားတဲ့ အချိန်
ပရိဿတ်အလည် အမေ မွန်းကြပ်မှာ
သား လက်ကို မြဲမြံ ဆုတ်ထား
သားက အမေ့ ကိုချစ်တယ်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:40 PM0comments